Ungalongeza njani umkhondo wokuKhangela kuGoogle kuHootsuite | Martech Zone
Ungayongeza njani umkhondo wokuKhangelwa kuGoogle kuHootsuite
NgoLwesithathu, Meyi 9, 2012 NgoLwesithathu, Agasti 22, 2018 Douglas Karr
Izolo sikuvakalisile oko DK New Media wabizwa a Hootsuite Isisombululo kwiQabane. Sonke besisebenzisa i Inkqubo yeHootsuite akhawunti iminyaka embalwa kwaye uzithande izinto eziqhubekayo kunye nokuguquguquka oko kubonelela ngeqela lethu. Kwaye… ngamaqhekeza endleko yeinjini zokupapasha kwezentlalo.
Besisoloko sityhala bonke abathengi bethu ukuba basebenzise ngokupheleleyo umkhondo wokulandela umkhondo xa bethumela amakhonkco abo Hootsuite. Uninzi lwabantu bacinga ukuba kufuneka babhale ngesandla i-URL yokubuza umbuzo- kodwa Hootsuite Ngokwenyani inikezela ujongano oluhle kakhulu lokufaka ulwazi olufunekayo lokulandela umkhankaso.
Iphulo lokubuza umbuzo liqulathe iiparameter ezintlanu:
Umthombo wephulo (utm_source) - Ipharamitha efunekayo. Sebenzisa utm_source ukuchonga injini yokukhangela, igama lencwadi, okanye omnye umthombo. Umzekelo: utm_source = google
Iphulo eliphakathi (utm_medium) - Ipharamitha efunekayo. Sebenzisa i-utm_medium ukuchonga indawo efana ne-imeyile okanye ucofa iindleko. Umzekelo: utm_medium = cpc
Ixesha lePhulo (utm_term) - ukhetho olukhethiweyo. Isetyenziselwe ukukhangela okuhlawulelweyo. Sebenzisa utm_term ukuqaphela amagama aphambili kule ntengiso.
Umzekelo: utm_term = ukubaleka + izihlangu
Umxholo wephulo (utm_content) - ukhetho olukhethiweyo. Isetyenziselwa uvavanyo lwe-A / B kunye nomxholo ojolise kwiintengiso. Sebenzisa utm_content ukwahlula iintengiso okanye amakhonkco akhomba kwi-URL efanayo. Imizekelo: utm_content = logolink or utm_content = ikhonkco lesicatshulwa
Igama lomkhankaso (utm_campaign) - ukhetho olukhethiweyo. Isetyenziselwe uhlalutyo lwamagama aphambili. Sebenzisa i-utm_campaign ukuchonga imveliso ethile yokwazisa okanye umkhankaso weqhinga. Umzekelo: utm_campaign = intwasahlobo_sale
Nantsi indawo yokusondela apho simisele khona i-URL Ukulandelela umkhankaso kaGoogle. Ukuba ujonga ibhokisi yokuzikhethela, unokuhlala usongeza umkhondo wokulandela umkhondo kuyo yonke i-URL. Ayisiyombono imbi leyo ... kwaye unokukufumana kwi-radar yeziza zangaphandle othumela kuzo ukugcwala kwabantu abaninzi.
Xa ufaka i-URL yakho kwindawo yekhonkco, uya kubona igiya onokucofa kuyo ukuze ulahle ezona ndawo ziphambili ukongeza umkhondo wephulo. Enye yezinto ezisetiweyo sele iGoogle Analytics. Ukuba usebenzisa enye iwebhu kubahlalutyi iqonga, ungongeza ngokulula ukuseta kwakho apha, nawe!
Siza kwabelana ngeengcebiso ezininzi kunye namaqhinga apha ngendlela yokusebenzisa ngokupheleleyo Inkqubo yeHootsuite kumaqhinga akho eendaba kwezentlalo. Ukubhengezwa: Siza kwabelana ngamakhonkco adibeneyo xa sithumela la manqaku.
tags: yokulandelela analyticsukulandelela umkhankasoi-google analyticshootsuite
Idatha enkulu izisa ukuThengisa amanani amakhulu
I-Veracity Technologies LLC
Meyi 24, 2012 kwi-7: 34 AM
Enkosi ngeli nqaku libalaseleyo! Ndiyakonwabela ukufunda ngezi ngcebiso!